बेहुली जस्तै सजाएर श्रीदेवीको अन्तिम बिदाइ.. – पुरा पढ्नुहोस्……
एजेन्सी: विश्वभरका आफ्ना करोडौँ फ्यानलाई रुवाउँदै बलिउडकी प्रख्यात अभिनेत्री श्रीदेवी जिन्दगीको अन्तिम यात्रामा निस्केकी छन् । करोडौँ फ्यानको मन मष्तिष्कमा बस्न सफल उनलाई बेहुली जस्तै सजाएर शव यात्रा मुम्बईबाट निकालिएको हो ।
बलिउडकी ‘चाँदनी’ श्रीदेवीलाई सेतो फूलले सजाइएको ट्रकमा राखेर अन्तिम यात्रामा निकालिएको हो । यसभन्दा पहिले श्रीदेवीलाई बेहुली जस्तै रातो कपडाले सजाइएको थियो ।
श्रीदेवीको अन्तिम दर्शनका लागि लाखौँ मानिससहित बलिउडका चर्चित हस्तीहरु मुम्बईको सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब पुगेका छन् । सलमान खान, शाहरुख, ऐश्वर्या राय र विद्या बालनसहित कयौँ स्टारहरु श्रीदेवीलाई देखेर रोएका छन् ।
अहिले श्रीदेवीको अन्तिम यात्रा शुरू भइसकेको छ । सेतो फूले सजाइएको ट्रकमा पार्थिव शरिर राखिएको छ । ट्रकमा पति बोनी कपुर, छोरा अर्जुन कपुर र छोरी बेटी जाह्नवी रहेका छ्न ।
श्रीदेवीलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाइ गरिँदैछ । शवयात्रा अघि नै मुम्बई पुलिसको ब्यान्ड पनि स्पोर्ट्स क्लबमा पुगेको थियो । श्रीदेवीलाई श्रद्धाञ्जली दिन काजोल र अजय देवगन पुगेका थिए ।
त्यसैगरी अभिनेत्री एश्वर्य राय बच्चन र जया बच्चन पनि श्रीदेवीको अन्तिम दर्शनका लागि पुगेका छन् । त्यसैगरीफराह खान, अक्षय खन्ना र रवि किशन पनि सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब पुगेका थिए । ‘चाँदनी’ को अन्तिम यात्रा अघि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि हेमा मालिनी आफ्नी छोरी ईशा देओलसहित पुगेकी थिइन् ।
Prevनेपालीको दुखमा साथ दिएका रबिले किन आज तिन करोड नेपालीको साथ मागे !! भिडियो सहित !!
Nextटेलिकमले ल्यायो ‘होली अफर’, अनलिमिडेट डाटा चलाउन पार्इने ।हेर्नूहोस
१४० रुपैयाँ किलोमा किनेको गोलभेडासंग सेल्फी खिचेर हराउला भनेर स्टुडियोमा रबी लामिछाने….
भयङ्कर सर्प संग भावना साट्न सक्ने अनौठी बालीका :: डरलाग्दो लाईब भिडियो हेर्नुहोस
भा’इरल बालिका कमला घिमिरे र राजु परियारको मार्मि’क दोहोरी , पहिलोपटक दुवै भा’वुक- हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित )
भिडियो …परि;वर्तनका लागि एक जोर चन्द्रसूर्यको ढोग गर्न ल.गाएको छु – प्रेम बानिया